Filtrer les éléments par date : mercredi, 30 juin 2021
mercredi, 30 juin 2021 12:40
Volamena : 47.84 Euro ny 1 grama
Mitetina 47 838.40 Euro androany alarobia 30 jona 2021 ny vidin'ny volamena 1kg eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Raha 4 568.13 Ariary ny 1 Euro, dia 218 532 030.19 Ariary izany ny kilao, na 218 532 Ariary ny graman'ny volamena.
160 000 Ariary eo no hakana ny 1grama any amin'ireo mpitrandraka, 5 000ar ny hetra sy haba alain'ny fanjakana, 5 000ar ny lany amin'ny fitaterana sy fanondranana azy.
30 000 Ariary izany no ifampizaran'ny mpanangona volamena, ny mpampiasa vola, ny mpanondrana sy ny mpandray azy any ivelany isaky ny grama.
Fihariana sarotra, nefa ilana vola be ampiasaina izany ny volamena, nefa mamelona Malagasy efa ho 5 tapitrisa izay misehatra aminy.
Mamelona ny Firenena satria 25% n'ny harin-karena dia ny asam-bolamena sy izay miankina aminy no entiny anatin'ny toe-karena malagasy.
mercredi, 30 juin 2021 12:39
30 juin : Journée mondiale des astéroïdes.
mercredi, 30 juin 2021 12:37
Jono vaventy : Fahazoan-dalana miisa 242 no nomena
Fahazoan-dalana amin’ny jono vaventy miisa 242 (Roanjato sy efapolo roa amby) no nomena.
mercredi, 30 juin 2021 12:36
Ady amin’ny halatr’omby : Mitohy ny fametrahana kavina elektronika sy marika voaradia
Omby maherin’ny 58 000 (Dimy alina sy valo arivo) no ezahan’ny fanjakana asiana marika voaradia, na puces électroniques, ary maherin’ny 450 600 (efatra hetsy sy dimy alina ary eninjato) no asiana kavina elektronika, araka ny nambaran'ny Praiminisitra Ntsay Christian teo anivon'ny Antenimierandoholona ny talata 29 jona 2021.
mercredi, 30 juin 2021 08:47
« Akany Iarivo Mivoy » Anosizato : Olona 190 ireo tsy manankialofana ampiana hiatrika ny fiainana eny an-toerana
Toerana andraisan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny « Fondation Axian » ireo olona tsy manankialofana mba omena torolanana sy fiofanana hiatrehany ny fiainany ny « Akany Iarivo Mivoy » etsy Anosizato.
Araka ny voalazan’ny tompon'andraikitra ao dia tokantrano miisa 79, izay misy olona 190 eo, ireo tsy manankialofana izay harenina eny an-toerana amin’izao.
Ao anatin’ny fanofanana ireo olo-dehibe ny Kaominina amin’izao, toy ny fampianarana (fambolena, fiompiana, zaitra … ary ireo maro samihafa), ka ny volana septambra izao dia efa hivoaka olom-banona hafa hiatrika ny fiarahamonina sy mahaleotena izy ireo, fa tsy hijanona ao amin’ny Ankany intsony.
Eo koa ny fampianarana ireo ankizy.
Mahazaka tsy manankialofana eo amin’ny 300 eo ny Akany.
mercredi, 30 juin 2021 08:43
Fitaterana : Hisy zotra an-dalamby roa hitaterana olona eto an-drenivohitra
Hiroso amin’ny fampiasana zotra an-dalamby hitaterana olona ny eto an-drenivohitra. Hisy zotra 2 (roa) amin’izany, dia ny Faritra Atsimo (corridor sud), izay manomboka eo Soarano PK0, mihazo Isotry, Ampefiloha, Soanierana, Ankadimbahoaka, Androndrakely ary mifarana eny Amoronakona PK12.
Efa miatomboka ny asa mahakasika an’io.
Ny zotra faharoa dia ny Faritra Avaratra (corridor nord), avy eny Alarobia mihazo an’Ankazomanga ary Soarano.
mercredi, 30 juin 2021 08:40
Tobin-tsolika vaovao : Manomboka ny asa eny Bongatsara - Atsimondrano
Miditra amin’ny fanaovana ny "terrassement" amin’izao fotoana izao ny orinasa misahana ny asa fametrahana ny "logistique pétrolière" na Tobin-tsolika vaovao eny Bongatsara, Distrika Antananarivo Atsimondrano.
Aorian’ny fahavitan’ny asa no hanomboka ny famindrana ny toby fametrahana solika eo Alarobia ho eny amin’io toerana io.
Dingana narahina izany, entina hirosoana amin’ny ho fanamboarana ny lalana miainga eo Marais Masay mihazo ny Gare Maki, fa ihany koa, ho vahaolana manoloana ny fitomboan’ny tinady ny solika eto amintsika.
mercredi, 30 juin 2021 08:33
Covid-19 : 914 no lavo tato anatin’ny taona 2020-2021
Anisany nivoitra nandritra ny tatitra nataon’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, ny talata 29 jona, nanoloana ny Antenimierandoholona ny tarehimarika mikasika ny fivoaran’ny valanaretina Covid-19 tato anatin’ny taona 2020-2021.
- 42 262 (Efatra alina sy roa arivo sy roanjato sy enimpolo roa amby) no trangana Covid-19 voamarina ;
- 41 811 (Efatra alina sy arivo sy valonjato sy folo iray amby) no sitrana ;
- 914 (Sivanjato sy folo efatra amby) no lavo nandritra izay fotoana izay.
mercredi, 30 juin 2021 08:30
Faritra Betsiboka : “Tsy ho ela intsony ny fanendrena ny Governora”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian
Mahakasika ireo Faritra 22, dia Governora miisa 21 (iraika amby roapolo) hatreto no efa voatendry hitantana ireo faritra ireo. Tsy ho ela intsony ny fanendrena ny Governoran’ny Faritra Betsiboka, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian nanoloana ireo Loholona nandritra ny tatitra nataony ny talata 29 jona 2021.
Mahakasika manokana ny Faritra dia notsiahivin’ny lehiben’ny governemanta efa eto anivon’ny parlemanta amin’izao fotoana izao ny volavolan-dalàna hametrahana ny faritra faha-23 eto Madagasikara, dia ny Faritra Fitovinany izay ao anatin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ankehitriny.
mercredi, 30 juin 2021 08:29
Antenimieram-pirenena : Nolanian’ny Solombavambahoaka ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana
Nodinihina sy nolanian’ny Solombavambahoaka, ny 29 jona 2021, ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR) ho amin’ny taona 2021. Natao teny amin’ny CCI Ivato sy am-pitain-davitra ny fivoriana.
Namela takaitra amin’ny lafiny maro ny fandalovan’ny Covid-19. Ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana dia mametraka ho tanjona ny fanarenana ny toekarena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka.
Tafiditra amin’ny laharam-pahamehana ny fanamboarana sy fanatsarana ny lalam-pirenena izay hahafahana mampiakatra ny vokatra, ny fampandrosoana ireo “zones d’émergence industrielle”, ny fanatanterahana ireo fanamby ho an’ny Faritra Atsimo, ny fametrahana indostria eny anivon’ny distrika rehetra, ary ny fampitaovana sy fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana.